LinuxBoot ichiri kurarama kwazvo ... | Linux Vakapindwa muropa
LinuxBoot ichiri kurarama kwazvo ...
Takatotaura nezvazvo LinuxBoot mune ino blog, yaive system yandaida kutsiva UEFI, ine mukurumbira wakaipa zvakadii. Iyi purojekiti yakamuka kunyanya ye HPC (yakavakirwa pa x86), ndiko kuti, kumaseva uye supercomputers, ndiko kwazviri kushandiswa parizvino. Iyo Linux Foundation inoda kutsiva UEFI zvachose uye chirongwa ichi idanho rakakura rekubvisa iyi inotonhorera, inononoka, uye dzimwe nguva inopwanya kana kuchengetedzeka-izere firmware.
Isu tatoziva kuti firmware yagara iine chinangwa chiri nyore, inova kutanga iyo inoshanda system. Asi nekuwedzera kuomarara kwehardware, izvi zviri kuramba zvichinetsa kuita. Parizvino, firmware inofanirwa kugadzirisa akawanda masisitimu, ane akawanda maficha kana bhuti midhiya, tsigira epamberi maprotocol uye ekuchengetedza maficha, zvichingodaro. Naizvozvo, chinhu chakareruka chave dambudziko rakaoma.
Kutanga-kumusoro kune zvikamu zvitatu: SEC, PEI uye DXE. Mutyairi kana DXE yekumhanyisa nguva nharaunda ndiko uko iyo UEFI system inotakura madhiraivha emidziyo yakagadzirirwa. LinuxBoot inotsiva yakatarwa firmware mashandiro senge ino UEFI DXE chikamu neLinux runtime kernel. Pamusoro pekuzadzisa kuvimbika kukuru kwekutanga, inopawo kuita kuri nani, kusvika kakapetwa ka20 nekukurumidza.
Izvo zvakaita kuti ive yakakwana kune vazhinji maseva uye supercomputers, uye zvakare mune zvakawanda zvakadzamidzirwa uye zvechiuto zvinoshandiswa Uye isu tine nhau dzakanaka kubvira, kunyange hazvo chirongwa ichi chichiita kunge chakamira, chiri chipenyu kwazvo. Izvi zvakakurukurwa kumusangano weFOSDEM 2019 uye mainjiniya kubva kuFacebook neGoogle vari kushingairira kubatsira kuchirongwa kuburitsa Hardware padanho repasi. Aya makambani maviri ari kuishandisa kuti iwane kukurumidza uye kuvimbika pamashini avo makuru, asi havazi ivo chete vanobatanidzwa, isu tave kuzivawo Horizon Computing, Two Sigma, 9elementes Cyber ​​Security, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LinuxBoot ichiri kurarama kwazvo ...
Waini 4.6 yekuvandudza vhezheni yakaburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo